टंक बुढाथोकी र मेलिना राईको स्वरमा सजिएको नया गीत ‘कसरी कसरी २’ गीत सार्वजनिक भएको छ । यस अघि टंक बुढाथोकीले नै रिलिज गरेको कसरि कसरि को दोश्रो संस्करण का रुपमा यस लाइ सार्बजनिक गरिएको हो। कसरि कसरि २ बोलको गीतमा टंक र मेलिनासँगै सुनिल क्षेत्री, एआर बुढाथोकी, आयुष गुरागाईं, दिपा श्रेष्ठ, दमन्ता श्रेष्ठ ले अभिनय गरेका छन्।
सधै झैँ टंकको गीतमा यस पटक भने अशोक दर्जी देखिएका छैनन्। यस गीतमा गायक टंक बुढाथोकीकै शब्द तथा संगीत रहेको छ भने यस गीतको भिडियोलाई सुदिप बरालले खिचेका छन् भने यस भिडियोलाई सन्देश शाहले सम्पादन गरेका छन्।
निकै सुन्दरी गायिका मेलिना राइले समेत यस गीतमा दमदार अभिनय गरेका छन्। यस भिडियोलाई कविराज गहतराजले निर्देशन गरेका छन् भने करण सिंहले यस गीतको निर्माण गरेका हुन् । यो गीतलाई दीपक राज सुनारले कोरियोग्राफी गरेका हुन् । हेर्नुस भिडियोमा
हात र खुट्टा गुमाएका कृष्णलाई राहत , लाहुरे र भाइरल मुनाको सहयोग ! नक्कली हातखुट्टा लाग्दै ( भिडियो ...
Previous Article तपाइको आजको भबिस्यबाणी – राशिफल : वि.सं.२०७६ साल साउन १७ गते शुक्रबार
Next Article आमाबुवाले मृगौला दिन नमान्दा, १६ वर्षे छाेरीले संसार नै छाडिन